Wararkii ugu dambeyay shirka madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyadda dalka (SAWIRO) - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wararkii ugu dambeyay shirka madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyadda dalka (SAWIRO)
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Fedaraalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Maxamed ayaa maanta furay shirka ay xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ku yeesheen madaxda dowladda fedaraalka iyo kuwa maamul gobaleedyada dalka.
Shirkaasi oo ahaa mid xasaasi ah ayaa mas’uuliyiinta ka qeyb gashay waxaa ka mid ahaa, madaxweyne Farmaajo, ra’iisul wasaare Kheyre, madaxweynayaasha maamulada Puntland C/weli Gaas, Jubbaland Axmed Madoobe, Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan, Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Carabeey.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee shirkaasi looga hadlay ayaa waxaa kamid ahaa xoojinta xiriirka wada-shaqeyneed ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka, xasilinta amniga dalka iyo shir bisha soo socoto ee MAY la filaayo inuu ka dhaco magaalada London ee dalka Britain.
Shirkaasi London ka furman doonno ayaa ah mid looga diiradda lagu saari doonno horumarinta iyo taageeridda la siinayo Soomaaliya, kaas oo ay dowladda Soomaaliya doonayso inay la tagto qorshe lagu mideysan yahay islamarkaana ay iyada hoggaamiso shirkaas.
Dhinaca kale, madaxwayne Farmaajo oo maanta ka hadlay qorshaha shirka London ayaa sheegay in dowladda dhexe iyo madaxda maamulada dalka ay shirkaasi la tagayaan wax ay ku midaysan yihiin, caalamkana ay tusayaan sida ay dadka Soomaaliyeed isugu duuban yihiin.
Shirkaan oo ah kii ugu horeeyay oo ay yeeshaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyadda dalka ayaa la filayaa in maalinta berri lasoo gaba-gabeeyo islamarkaana laga soo saaro war-murtiyeed uu ku qoran yahay qodobadii shirkaasi looga hadlay iyo waxyaabihii la isku afgartay.